Shirkadda hormuud oo soo kordhisay adeeg cusub oo la magic baxay DHAMBAAL - iftineducation.com
Shirkadda hormuud oo soo kordhisay adeeg cusub oo la magic baxay DHAMBAAL
iftineducation.com – Shirkadda hormuud oo soo kordhisay adeeg cusub oo la magic baxay DHAMBAAL
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa soo kordhisay adeeg cusub oo casri ah oo loogu magac daray DHAMBAAL, kaasoo macaamiisha u suura gelinaya in ay isu diraan farriimo Maqal ah.
Adeeggan oo ah mid dunida oo dhan laga isticmaalo ayaa waxa ay shirkadda Hormuud Telecom ugu talo gashay in ay ka faa’iideystaan dhammaan macaamiisheeda.
FAA’IIDOOYINKA ADEEGGA DHAMBAAL
Adeegan ayaa waxaa isticmaali kara Macmiil kasta oo haysta SIM Card-ka Hormuud waxa uu farriin Cod ah udiri karaa Dhammaan Asxaabtiisa kale ee isticmaasha SIM Card-ka Hormuud.
Adeeggan Casriga ah ee DHAMBAAL ayaa waxaa ka faa’iideysan kara dhammaan qeybaha kala duwan ee Bulshada, waxaana sidoo kale isticmaali kara dadka Aragga la’, waayeelka, dadka ay ku adagtahay in ay wax qoraan & Dadka raba in ay isu diraan Farriin Codeed.
HABKA ISTICMAALKA ADEEGGAN DHAMBAAL
Adeeggan furashadiisa 1aad waa bilaash, dhammaan macaamiishuna waxay isticmaali karaan iyaga oo aan marin isdiiwaan gelin.
Qaabka isticmaalka ayaa ah markii aad rabto in aad farriin codeed gaarsiiso saaxiibkaa waxaad garaaceysaa 133 adigoo raacinaya lambarka aad udireyso farriinta, tusaale: 13361XXXXX.
Sidoo kale farriimaha laguu soo diray waxaad si fudud uga dhegeysan kartaa adigoo wacaya 134.
Shirkadda Hormuud Telecom oo ah Isgaarsiinta ugu ballaaran Dalka ayaa mar walba waxay ku dadaashaa in ay soo kordhiso adeegyo Casri ah, waxa ayna horay u hirgelisay adeegyo badan oo ay ka mid yihiin: Adeegga 4G MiFi internet, ADSL, WADSL, EVC Plus, Dalmar International Roaming & adeegyo kale oo dheeraad ah sida: Ilawadaag, Nasiye, Aqoon-maal & Voice Mail.
hababka wasmada ugu macaan